HypeAuditor: ny marketing marketing influencer ho an'ny Instagram, YouTube, TikTok, na Twitch | Martech Zone
HypeAuditor: ny marketing marketing influencer ho an'ny Instagram, YouTube, TikTok, na Twitch
Alarobia, Septambra 29, 2021 Alarobia, Septambra 29, 2021 Douglas Karr
Nandritra izay taona vitsy lasa izay, tena nanamboatra ny laharam-pahamehan'ny marketing sy influencer aho. Mahay mifantina tsara aho amin'ny fiaraha-miasa amin'ny marika - miantoka ny lazany namboariko tsy ho voaloto raha mametraka ny fanantenana amin'ny marika momba ny fomba ahafahako manampy. Manan-kery fotsiny ny influencer satria misy mpihaino izay matoky, mihaino ary miasa amin'ny vaovao na tolo-kevitr'izy ireo. Manomboha mivarotra banga ary ho very ny fahatokisan'ny mpihaino anao. Very ny fitokisany ary tsy influencer intsony ianao!
Rehefa nanontaniana izy hoe inona no tadiavin'ireo influencer amin'ny kianja avy amin'ny marika:
59% n'ny influencer no nilaza fa te hahita hevitra mazava momba ny teti-bola misy ary antenaina hatolotra
61% amin'ireo mpiorina dia maniry famaritana mazava momba ny vokatra na serivisy hanaovana doka
Maherin'ny antsasaky (51%) no nangataka fampahalalana momba ilay orinasa hifaneraserany
Matetika aho no manosika ireo orinasa izay iarahako miasa amin'ny fanarahana rohy ary matetika manokatra amin'ny fitsapana izay tsy mandany vola na inona na inona aho raha tsy manondro fidiram-bola tena izy any amin'ny farany ambany. Amin'izany fomba izany ireo orinasa hiarahako miasa dia tsy mahatsapa ho ripping azy ireo aho raha tsy mifanaraka amin'ny andrasana ny fampielezan-kevitra. Toy izany koa, tsy mankaleo ry zareo ny manapaka maso ahy raha toa ka mifindra mpanjifa vaovao aho. Raha mifanentana eo amin'ny mpihaino sy ny orinasa ary ny tenako miaraka amin'ny famoahana azy tanteraka eny an-dàlana… dia mamelana ny fifandraisana.
Izany dia nilaza fa ny fampielezan-kevitra tokana dia tsy mampihetsika ny fanjaitra. Ny fahombiazana azoko dia ireo orinasa nifikitra tamiko nandritra ny herintaona na mihoatra izay nanohizako azy ireo matetika. Izany no antony maha-zava-dehibe ny fampiasana ireo marika hiarahako miasa sehatra marketing lehibe influencer ho an'ny fanarahana ny fivoaran'ny fifandraisanay.
HypeAuditor manampy ireo masoivoho, marika ary sehatra hanatsara ny fahombiazan'ny fampielezan-kevitr'izy ireo amin'ny marketing
HypeAuditor: ny Influencer Marketing Stack
HypeAuditor manara-maso influencer mahery 23 tapitrisa, manana metatra mihoatra ny 35 amin'ny fitsirihana maso, ary rafitra fitadiavana hosoka kilasy tsara indrindra izay mampiasa AI. Manara-maso ny Instagram, YouTube, TikTok, ary Twitch izy ireo ary manome angona sy fahitana ho an'ny fahombiazana amin'ny marketing influencer. Miaraka amin'ny HypeAuditor, ny orinasanao dia afaka mampiasa ireto fitaovana manaraka ireto:
Mahita influencer Instagram, YouTube, ary TikTok mifanentana tanteraka amin'ny mombamomba 12M + amin'ny fampiasana andiana sivana izay hanampy amin'ny fanadiovana ny lisitra amin'ireo mombamomba avo lenta.
Mihoatra ny 35 metric lalina handinihana ireo influencer Instagram, YouTube, TikTok & Twitch. Toerana misy ny mpijery, fisarahana misy eo amin'ny lahy sy ny vavy, azo itokisana sy azo ahatongavana, kalitaon'ny mpihaino amin'ny ankapobeny.
Tantano ary ataovy mandeha ho azy ny fampielezan-kevitrao isaky ny dingana manomboka amin'ny lisitry ny influencer ka hatramin'ny tatitra momba ny fampielezana farany. Araho maso ny fahombiazan'ny fampielezan-kevitra ary manaova fanitsiana ilaina.
Jereo ny tontolon'ny fifaninanana ary tombano ny fahombiazan'ny varotra influencer an'ny mpifaninana aminao. Ampitahao mifanila aminy ireo marika marobe ary tadiavo ireo mpilalao tsena ambony amin'ny firenena sy ny toerana manokana.
HypeAuditor dia namolavola teknolojia manavao izay mahatonga ny indostrian'ny marketing influencer ho ara-drariny sy mangarahara. Ny tanjon'i HypeAuditor dia ny manampy ireo mpivarotra hamorona fampielezankevitra marketing miavaka sy mahomby amin'ny alàlan'ny fomba fitadiavana data.
Manomboha amin'ny HypeAuditor maimaim-poana
Fampahafantarana: Mampiasa ny HypeAuditor Affiliate rohy ato amin'ity lahatsoratra ity.
Tags: mahita ny influencersmahita ny influencers instagrammitadiava olona manan-kery TikTokmahita influencers twitchmahita ny influencers YouTubefahitana hosokahosoka influencermarketing marketinginfluencer amin'ny instagrammpanentana tiktokinfluencersinfluencers youtube
Ahoana no ahafahan'ny dokambarotra mifototra amin'ny fiainana manampy antsika hiomana amin'ny ho avy tsy voarindra?
RANT: Iza no tompon'ny domaino?